China Paddle Mixer Manufacture and Factory | tampon
1. fonosana mixer
2. Kabinetra elektrika sy tontonana fanaraha-maso
4. Hopper mixer
5. valizy pneumatika
6. tongotra sy caster finday
Ny mixer amin'ny zana-kazo tokana dia mety amin'ny vovoka sy vovoka, granule ary granule na manampy ranon-javatra kely amin'ny fampifangaroana, ampiharina betsaka amin'ny voanjo, tsaramaso, sarany na karazana granule hafa, ao anatin'ny masinina dia manana zoro elatra samihafa. Atsipy ny fitaovana ary ampifangaroana ny hazo fijaliana.
Ny paddles dia manipy fitaovana avy amin'ny fampifangaroana ny tanky ambany ka hatramin'ny ambony amin'ny zoro samihafa
Endri-javatra misy fitaovana fampifangaroana hoe
1. Ahodina mihodina ary atsipazo fitaovana amin'ny zoro samihafa, mifangaro 1-3mm fotoana.
2. Ny famolavolana sy ny vodin-kazo mihodina dia fenoy hopper, fampifangaroana ny fitoviana hatramin'ny 99%.
3. Ny elanelana 2-5mm ihany eo anelanelan'ny vatan-kazo sy ny rindrina, ny lavaka famoahana karazana malalaka.
4. Famolavolana patanty ary alao antoka fa ny axie mihodina sy ny loaka manala tsy misy famoahana.
5. Fomba fanodinana sy famolahana feno amin'ny fampifangaroana ny hopper, tsy misy singa mifatotra toy ny visy, voanjo.
6. Ny milina iray manontolo dia vita amin'ny alim-by tsy miova 100% mba hahatonga ny mombamomba azy ho kanto afa-tsy ny fipetrahana seza.
Misy ny fanamafisana orina amin'ny famolavolana fonosana mixer, izay mahatonga ny sarony ho matanjaka kokoa ary hitazona ny lanjany ho kely kokoa miaraka amin'izay.
Ity endrika ity dia avo lenta sy azo antoka.
Ny famehezana silika dia mety hahomby amin'ny famehezana ary mora diovina.
Ny ampahany rehetra amin'ny fampifandraisana finday dia lasitra feno, ao anatin'izany ny sambo, ny boaty, ny tanky, sns.
Ny ampahany anatiny ao anaty tank dia voaravaka fitaratra, izany hoe tsy misy faritra maty, ary mora diovina.
A. Azo antoka kokoa ny miaro ny mpandraharaha ary mora ny manamboatra entana amin'ny kitapo lehibe.
B. Fisorohana ny fahalavoan'ny raharaham-bahiny amin'izany.
C. Raha manana clumps lehibe ny vokatrao dia afaka manapaka azy ilay grid.
19. Flap miolakolaka
1. Ny fonosana tanky mixer dia azo namboarina arakaraka ny fepetra samihafa.
Ny valizy famoahana paddle mixer dia azo entina amin'ny tanana na amin'ny pneumatika. Valizy azo avela: valve varingarina, valizy lolo sns.
Ny mixer aorian'izany dia misy paompy, noza ary hopper. Rano kely azo afangaro amin'ny vovoka.
Ity mixer paddle ity dia azo noforonina miaraka amina asa mangatsiaka sy mafana koa. Ampio sosona ao anaty tanky, apetaho amin'ny sosona afovoany ny medium, ataovy mangatsiaka na mafana ny fitaovana mifangaro. Matetika mangatsiaka amin'ny rano izy io ary manafana amin'ny etona mafana na herinaratra.
Teo aloha: Tsipika fonosana vovoka
Manaraka: Masinina mameno vovoka
Mpifangaro valan-tsivalana mitsivalana
Masinina fampifangaroana paddle
Fangaro mixer Vs Paddle Mixer